स्थानीय चुनावमा भोट कसरी हाल्ने ? पढ्नुहोस् ध्यानदिनुपर्ने ४ कुरा | Hamro Madi
प्रकाशित मिति: ०८ बैशाख, २०७४
मतदान गर्न करिब २० दिनमात्र बाँकी रहँदा मतदाताहरुमा मतदान प्रक्रियाबारे अझै अन्योल हटेको छैन । उसोभए आगामी निर्वाचनमा कसरी मतदान गर्ने त ? यहाँ केही टिप्सहरु दिइएको छः
यदि तपाईको नाम मतदाता नामावलीमा छ भने अब तपाईले भोट दिन पक्का पाउनु हुनेछ ।
मतदाता नामावलीमा नाम भए नभएको हेर्न यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ >> http://election.gov.np/election/np/bbvrs
निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमै तपाईको निर्वाचन केन्द्र तोकेको हुन्छ । पहिला भएको मतदान केन्द्र फेरिएको पनि हुनसक्छ । त्यो मतदान केन्द्र ०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाका लागि मात्र तोकिएको थियो । अब हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि आयोगले मतदान केन्द्रहरु हेरफेर गरेको छ ।
तपाईले नयाँ अद्यावधि गरेको मतदाता नामावलीमा मात्र अगामी निर्वाचनमा तपाईले मतदान गर्ने मतदान केन्द्र तोकिएको छ । बैशाख ३१ गते तपाइले तोकिएको मतदान केन्द्रमा गएर मात्र मत दिन सक्नुहुनेछ ।
तपाईले मतदान गर्ने तरिका अझै बुझ्नुभएको छैन ? यदि त्यस्तो हो भने चिन्ता गर्नु पर्दैन । निर्वाचन आयोगले चैत २८ गतेदेखि नै देशभर एकै चोटि कम्तिमा २१ हजार मतदाता शिक्षा स्वयम्सेवक परिचालन गरेको छ । उनीहरुले तपाईलाई कसरी मतदान गर्ने भन्नेकुरा सिकाउने छन् । ती स्वयम्सेवकसँग नमूना मतपत्र हुनेछ । र, उनीहरुले कसरी मतपत्र लिने र आफ्ना उम्मेदवारहरुलाई भोट दिने कुरा सिकाउनेछन् । यस्तै दलका प्रतिनिधिले समेत यो कुरा सिकाउनेछन् ।
गत ०७० सालको निर्वाचनमा करिब ८ हजारमात्रै मतदाता शिक्षा स्वयम्सेवक परिचालन गरेकोमा निर्वाचन आयोगले यस निर्वाचनका लागि भने कम्तिमा २१ हजार मतदाता शिक्षा स्वयम्सेवक परिचालन गरेको हो ।